Nestlé na-abawanye ọgaranya n'azụ ụmụaka Ivorian: Ihe nchịkwa nke nrigbu nwoke site na Karl Marx ka dị mkpa
Ọrụ ụmụaka na-eme Nestlé dị na Côte d'Ivoire bụ otu n'ime ihe atụ kachasị mma, ihe gbasara ikpe na-ezighị ezi na-emekarị ka ọ bụrụ ihe na-ewute.
Ọrụ ụmụaka Ivorian na nnọchite anya Nestlé na obi ụtọ bụ ihe na-awụ akpata oyi n'ahụ. Site na imekpa ha ahu aru na omume, kamakwa na ihe ndi ochichi Ivory Coast. agaghị ahapụ ndị na-enweghị uche na ikpe ziri ezi na ụmụ mmadụ.
Ces enfants n’ont pas leur place dans les champs du café ou du cacao. Mana ọnọdụ ha dị n’ụlọ akwụkwọ. Site n'iji ụmụ Ivoria eme ihe, Nestlé na-atụfe ọdịnihu ha. Ma, n'ụlọ, ụmụ anaghị arụ ọrụ. Ha niile na-aga akwụkwọ.
Anyị maara na ndị ọcha anaghị ahapụ ịgba ohu. Ma, ka ha chekwaa ụmụaka site na àgwà ha. Nestlé: ụmụaka Ivorian n'efu.
Oge kachasị dị mkpirikpi n'akụkọ ihe mere eme: Ị maara? Zanzibar bụ oge kachasị njọ na akụkọ ihe mere eme